Arts & Humanities » ကာမတဏှာ (ဦးနု)	27
ဖြေ ။	။ မျက်စိနဲ့ တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့် မကြည့်နဲ့၊ ဘယ်သူနဲ့ဘဲ စကားပြောရ ပြောရ မျက်စိက မကလက်နဲ့ ၊ တည်တည်ကြည်ကြည် ကြည့်ပြီးတော့ အကုသိုလ်ဖြစ်မယ့်ဟာတွေ ဆိုရင် မကြည့်မိအောင် နားမထောင်မိအောင် မရှူရှိုက်မိအောင် မစားမသောက်မိအောင် မထိမတွေ့မိအောင် စိတ်မကူးမိအောင် အစွမ်းကုန်ထိန်းရမယ်။ ဒီအတိုင်း ထိန်းနိုင်ရင် မိန်းမလဲ မိန်းမကောင်း ယောက်ျားလဲ ယောက်ျား ကောင်းဘဲ၊
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကောင်းလိုက်တာ။
Shwe Ei says: အနှစ်တေ ရှောက်ထုတ်ရင်း များသွားလို့ ဂလောက်နဲ့ ရပ်လိုက်ရတယ် :P
သဂျီးကိုတော့ မြန်မာဖောင့် အဆင်မပြေတဲ့ အကြောင်း ပြောလဲ ပြောချင်တယ် ပြောလဲပြောရဲဘူး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .သဂျီးမလာခင်ဝင်ဖတ်ပီးမန့်သွားပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ဦးနုဆိုတာက… ပြည်ဖျက်နိမိတ်ကြီး ၃ပါး.. စကားကြီး၃ခွန်းမှာ.. တခွန်းကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ပေးသွားသူလို့.. နောက်ပိုင်းသဘောပေါက်ထားတယ်…။
၁။ ၀မ်းနည်းခြင်း ပူဆွေးခြင်း ငိုကြွေးခြင်း ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း ဆိုတာတွေဟာ ချစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တာဘဲ၊ ချစ်ခြင်းဟာ အခုပြောခဲ့တဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့ အမွန်အစ ဖြစ်တယ် (ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား)
၂။ မျက်စိနဲ့ တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့် မကြည့်နဲ့၊ ဘယ်သူနဲ့ဘဲ စကားပြောရ ပြောရ မျက်စိက မကလက်နဲ့ ၊ တည်တည်ကြည်ကြည် ကြည့်ပြီးတော့ အကုသိုလ်ဖြစ်မယ့်ဟာတွေ ဆိုရင် မကြည့်မိအောင် နားမထောင်မိအောင် မရှူရှိုက်မိအောင် မစားမသောက်မိအောင် မထိမတွေ့မိအောင် စိတ်မကူးမိအောင် အစွမ်းကုန်ထိန်းရမယ်။ ထိန်းမနေပဲ.. လူ့ဘ၀စွန့်လွှတ်ပြီးသေပလိုက်ရင်ပိုမသေချာဖူးလားမေးချင်မိ…။
Shwe Ei says: ပြောချင်တာလေးတွေ အားပါးတရ ပြောခွင့်ရဖို့ .. ပြောလို့ အကောင်းဆုံး အချက်လေးတွေ
ဆွဲထုတ်နိုင်တာ သဂျီးရဲ့ တက်ကနစ်ပါဘဲလို့စ် -ဆွဲလက်စနဲ့ ဆက်ဆွဲအုံးမယ်
kai says: ဒီလို.. အိမမခင်ဗျ…
အဲလိုအတိအကျ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -သဂျီးမင်းရဲ့ ဂင်္ဂါမြစ်က သဲမှုန်ဘဲဖစ်ဖစ် ကယ်လီဖိုးနီးယား သဲမှုန်ဘဲ ဖစ်ဖစ်…လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ နဲ့ အချိုးချကျိရင်.. ရာခိုင်နှုန်းက အပြည့်မထွက်ဘဲ..ပွိုင့်နဲ့တောင် ထွက်လာမှာလေ..
Mike says: .…. ဘာသာရေးနဲ့.. နိုင်ငံရေးအတင်းစွဲစေ့ပေးသွားသူကြီးပေါ့..။
Ma Ma says: အဲဒီစာအုပ်ကို အမွှာညီအမကျေးဇူးနဲ့ ဖတ်ဖူးတယ်။
စာအုပ်ထဲက အဲလိုအနှစ်ဆွဲထုတ်ပေးတာမျိုးကို စာဖတ်ပျင်းတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၁၀၀% ထောက်ခံသွားပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: တကယ်တော့ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးနဲ့ ကြည့်ရင် တ၀က်လောက်ဘဲ ဆွဲထုတ်နိုင်သေးတာဗျ..
ကျန်တာတွေ ဆက်ဆွဲထုတ်ရင် သဂျီးမင်း ဘလော့လိုက်မှာစိုးလို့..တော်သေးဘီ :P
မြစပဲရိုး says: မဖတ်ဘူး လို့ မျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
kai says: လွတ်လပ်ရေးရပြီးလပိုင်းနဲ့. .. တပြည်လုံးသူပုန်ထကုန်တယ်..။
Shwe Ei says: အနော်လဲ ဖတ်ချင်လွန်းလို့တော့မဟုတ်
မြစပဲရိုး says: ဒီတော့ အရီး လဲ နောက်တစ်ခေါက် အသေအချာ ထပ်ဖတ်မယ် အေ။ :-)))
@QUIL@ says: စာကောင်းပေကောင်းလေး ဖတ်မဟဲ့ဆိုပီး ၀င်လာပါတယ်
kai says: ၈၈ကပေါ့…။ ကျွန်တော်သာလျှင်တရားဝင်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေငြာတယ်..။
Wow says: ဒဂျီးနဲ့ဦးနုက လင်လုဖက်… အဲလေ ခေတ်ပြိုင်ဒွေလားဟင်င်င် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Alinsett @ Maung Thura says: Very Good Post !!!
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ အများကြီးစားပြီးတဲ့အခါ ၀မ်းထဲမှာ အစာချက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အနှစ်သာရ တွေ ပြန်ထွက်လာတာပေါ့နော်။ ပြန်တော့ သုံးလို့ မရဘူးပေါ့နော်။ လူ့ဘ၀ကြီးမှာလေ။ မြေသြဇာတော့ ဖြစ်တာပေါ့နော်။
Shwe Ei says: -အမပြုံးရေ..ကျနော်တော့ ဒီပို့စ်ထဲက စာတွေက ပြန်သုံးလို့ မရဘူးလို့ လုံးဝမထင်ဘူး…
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: ဦးနု ရေးခဲ့တဲ့ တာတေစနေသား စာအုပ်ဖတ်ဖူးတယ်..
ကိုယ့်က အဲ့တုန်းက တာတေလန်ဖြစ်နေတာကိုး.. ဟီးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -တာတေ စနေသား စာအုပ် ဒီလထဲ ဖတ်ဖြစ်လိမ့်မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: အမဲသားနဲ့နိုင်ငံရေးဆက်စပ်မှုဘယ်လောက်ကြီးသလည်းသိစေဖို့ပါ…။
Shwe Ei says: -သဂျီး လုပ်တာနဲ့ သများပို့စ်လဲ အမဲသားပို့စ်ဖစ်တော့မယ်…
​ဒေါ် လေး says: အဲဒီစာအုပ် ကို ၂၀ကျော်မှာ စဖတ်ပြီး ခု တခုမှမမှတ်မိ
Shwe Ei says: -ဒီပို့စ်ရေးတုန်းက ဖတ်မဲ့လူရှိလိမ့်မယ်တောင် မထင်ဘူး :P